FBC - Daandii fi daldala cufsiisun har’aa qabee dhaabbachuu qaba -Dooktar Abiy Ahimad
Daandii fi daldala cufsiisun har’aa qabee dhaabbachuu qaba -Dooktar Abiy Ahimad
Finfinnee, Gurraandhala 6,2010(FBC)- Ummanni gurmaa'ee karaa nagaatin mootummaa ofii dirqisiisuu, dhiibbaa irratti uumuun gaaffii kaasuun sirna demokraatawaa keessatti baay'ee murteessaadha jedhan Dooktar Abiy Ahimad.
Sadarkaa itti aanaa preezdaantiitti itti gaafatamaan Waajjira DhDUO Dooktar Abiy Ahimad haala yeroorratti har’a ibsa laataniiru.
Gaaffii gaafatamuuf akkamiin gurmoofnee waa goonan, sirriitti yaadamuu, bitaa fi mirga ofii ilaaluun xiinxaluu barbaada jedhan.
Kunis karaa ummataa fi qabeenya biyyaa hin miinen ta'uu qaba kan jedhan Dooktar Abiy, yeroo ammaa lagannaa gabaa kanaan walqabatee gaaffii ka'aa jiru keessaa tokko namoonni hidhaman gadhiifamuu qabuudha.
Kanammoo mootummaan naannoo Oromiyaa haaromsaa as uumame akka hojii ijootti qabachuun namoonni hidhamanii jiran ba'anii hojii misoomaa keessatti akka qooda fudhatan murtaa'eera.
Hidhaan baayyannaan ummanni ni rakkata, guddachuufis ta'e jijjiiramuu hin danda'u; kanaaf kana murteessinee ajandaa keenya ijoo taasifannee hojjechaa turreerra jedhan.
Ajandaa qofa osoo hin taane, hojii qabatamaa hojjenneerran kaasan.
Akka naannoo Oromiyaatti namoota kuma 30 ol haaromsaa as hiikuu dandeenyeerra kan jedhan Dooktar Abiy, kun kan aangoo mootummaa naannoo jala jiru akka ta’e himan.
Kan mootummaan fedeeraalaa gochuu qabus qabsoo hadha'aa fi cimaa taasifneerra. Kanaanis hojiin hojjetame jira jedhaniiru.
Namoonni harka mootummaa federaalaatti dhimmisaanii ilaalamaa jiru walakkaa ol himannisaanii addaan citee akka hiikaman ta'eera, kun ga'aadha jennee hin fudhanne jedhan Dooktar Abiy.
Kanneen hafanis akka ba'aniif qabsoofnee walii galuudhan namoonni kun akka gadhiifaman murtaa'eera. Kunis hatattamaan xumurama jedhan.
Dhimmoota irratti walii gallee fi ummata keenyaafis ifa goone harcaatii tokko male hojjiirra ni oola; sochii DhDUOn taasisaa jiru biyyi guutun kan beeku jedhan Dooktar Abiy.
Tarkaanfii gurguddaa ummata keenya fayyadu fudhachuu eegalleerra; haata'u malee, yeroo ammaa maqaa gabaa lagannaa kana keessa dhokachuun maqaa Oromootin qabeenya namaa fi mootummaa saamuu fi barbadeessuu, sabaa fi sablammoota naannoo keenyaa miidhuu, qaamolee nageenyaa miidhuu fi kkf rawwatamaa jiraan ibsan.
Kun safartuu kamiinuu fudhatama hin qabu. Qaamonni kana keessa dhokatanii miidhaa geggeessaa jiran jiru. Kun ammoo olaantuummaan seeraa seeraan sirrachuu qabaan dhaamaniiru.
Oromiyaa keessatti karaa seeraa namni kamiyyuu hojjetee jiraachu danda'a, nagayaan ba'ee galuu qaba. Namni maatiin jalaa dhukkubsate mana yaalaa deemuu qaba. Hiyyeessi jireenya gadaanaa jiraatu hojjetatee nyaachuu qaba jedhanii, gaaffilee amma kana'anii fi dhimmoota baraarratti mootummaan naannichaa xiyyeeffannaan hojjechaa jira; murteerras ga'ameera jedhaniiru.
Kanaaf dargaggoonni keenya tasgabbaa'anii eeguu qabu; daandii cufuun, namni akka daldalasaa cufatu dirqisiisunis sirrii miti jedhan.
Gochi amma eegalame kun hataattamaan dhaabbachuu qaba kan jedhan Dooktar Abiy, dubbiin gara biraatti ba'uu danda'aanis dhaamaniiru.
Dubbiin gara biraatti demnaan ammoo kan miidhamu ummata Oromooti; qeerroo Oromooti. Kanaaf ummanni keenyaa fi dargaggoonni keenya har'aa kaasanii sochii kana dhaabsisuun barbaachisaadha jedhaniiru.
Oduuwwan Biroo « Yaa’iin idil addunyaa farra IS Kuweetitti gaggeeffamaa jira	Korichi kallattiiwwan kaa'e hojiirra oolchuuf ummanni yeroo laachu qaba -aadde Uummii Abbaa Jamaal »